Programan'ny Virtual Office, fantatra ihany koa amin'ny Programan'ny foiben'ny orinasa
Ny birao virtoaly dia serivisy iray izay manome adiresy mailaka sy tolotra antso an-tariby. Ny orinasa mampiasa ny fanompoana tsy mipetraka amin'ny birao. Matetika ny orinasa maromaro no mampiasa ny adiresin'ny birao virtoaly. Vokatr'izany, ity tolotra ity dia manome tahiry manan-danja amin'ny trano biriky nentim-paharazana sy ny vidin'ny receptionist. Ankoatra izany, maro ireo olona mampiasa io fananganana io ho an'ny fiainana manokana. Izany dia noho izany, ny fananana ao amin'ny orinasa na orinasa dia tsy mifamatotra amin'ny adiresin'ny tompony, manamboninahitra na tale.
Ny Programan'ny Virtual Office dia ao amin'ny fanjakana amerikana 50 rehetra ary firenena maro.
Nomenae mpiandraikitra sy tale
Ny tolotra manokana momba ny tsiambaratelo dia ny iray amin'ireo mpiara-miombon'antoka amintsika izay miseho ao amin'ny rakitsoratry ny daholobe ho mpiandraikitra sy mpitantana ny orinasanao na ny tompon'andraikitry ny LLC. Ianao no mifehy indrindra amin'ny fitazonana ny zo rehetra mifidy, amin'ny fananana ny orinasa. Mety misy ny fepetra fanampiny mihatra. Na izany aza, dia misy olona mijery ny orinasa na ny anaranao ao amin'ny rakitsoratry ny daholobe, tsy mahita fifandraisana misy eo aminao sy ny orinasa. Noho izany, afaka manana kaonty banky lehibe na brokerage amin'ny anaran'ny orinasa ianao. Tsy hahita azy mora foana ny maso.
Ankoatra izany, afaka manana fananana tsy ara-dalàna ho anao izy. Noho izany, inona no hitan'ny mpisolovava tsy manam-paharoa mahita raha mitady ny fanànanao? Tsy misy dikany. Manana vola ampy sy harena hafa ve ianao raha manonitra anao? Angamba tsy, raha manana ny harenanao amin'ny fitaovana ara-dalàna ianao.
Misy tombontsoa maro anananao rehefa ianao mampiditra na mamorona orinasa. Izany indrindra no zava-misy rehefa mamorona Nevada na ianao Wyoming LLC miaraka amin'ny kaontin'ny banky. Izany dia satria ny lalàna miaro ny harena ao amin'ireo fahefana roa ireo dia manafoana ny ankamaroan'ny fanjakana. Mbola misy fiarovana lehibe kokoa amin'ny fiarovana amin'ny alàlan'ny alam-barotra, toy ny an'ny orinasa Nevis LLC. Ambonin'izany, dia araraoty ireo lalàna izay miaro ny mpandray anjara, ny manamboninahitra ary ny tale. Nevada sy Wyoming no matanjaka indrindra any Etazonia. Ambonin'izany, tsy misy ny hetra avy amin'ny orinasam-panjakana ao anatin'ny iray amin'ireo fanjakana ireo. Nevis no firenena matanjaka indrindra eran-tany. Tahaka izany koa, tsy misy haba ny fidiram-bola amin'ity toerana malaza ity. Ankehitriny, ny vahoaka amerikana dia voatery haba amin'ny fidiram-bola manerantany, ka midika izany fa tsy misy fepetra momba ny hetra amin'ny vola miditra ao anatin'io fahefana io.
Ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa ny orinasa Nevada, Wyoming na orinasa afrikana noho ireto antony voalohany ireto:
· Na miasa amin'ny orinasam-panjakana eo amin'ny toerany, na,
- Mba hiarovana ny fananana manokana sy hampitombo ny fiainana manokana sy ny tsiambaratelo
Ny roa amin'ireo antony ireo dia mety ho tena mahasoa ny orinasanao. Saingy misy dingana azonao atao mba hahazoana antoka fa hahita ireo tombony antenainao ianao. Ankoatra izany, afaka manatsara ireo tombontsoa ireo ianao amin'ny fampidirana ireo tolotra nomena mba hanatsarana ny fiainanao manokana araka izay efa noresahantsika etsy ambony.
Nevada na Wyoming Corporation ao amin'ny firenena misy anao
Ny orinasa natsangana any amin'ny iray amin'ireo fanjakana 50 dia afaka mitondra orinasa any amin'ny firenena rehetra. Ohatra, anontanio hoe monina any Californie ianao ary manana orinasa mpamily fiara. Te hanamaivana ny hetra aloanao ianao ary hanome fiarovana bebe kokoa ny fananananao. Noho izany dia mamorona orinasan'ny Nevada ho an'ny orinasanao ianao, ary misoratra anarana any amin'ny orinasa vahiny any Kalifornia. Ity dia fantatra amin'ny hoe "kalitao avy any ivelany." Ny fanjakana any California dia haba izay vola miditra avy amin'io fanjakana io.
Na izany aza, ny orinasanao dia mbola afaka mankafy ny sata tsy misy fetra any Nevada amin'ny vola miditra rehetra ao amin'io fanjakana io. Toy izany ihany koa ho an'ny firenena hafa izay niasa izay nanana lalàna tsy misy hetran'ny fanjakana, na ny fepetran'ny "kalitao vahiny". Mba hahafahanao mankafy ireo tombontsoa azo avy amin'ny hetra anefa dia tsy maintsy ho "orinasam-pianakaviana" izany. Ireo fepetra voalaza etsy ambany dia hamaritra izany.
Ampitomboy ny fiarovana sy ny fiarovana ny harena
Ny orinasa Nevada dia manolotra fiarovana manokana sy fiarovana tsara ho an'ny talen'ny orinasam-panjakana, ny tompon'andraikitra, ary ny tompona orinasa. Amin'ny alàlan'ny sata, ny tompom-pahefana, na ny manamboninahitra / mpitantana dia mety tsy azo omena amin'ny trosa na ny trosa rehetra ataon'ny orinasa Nevada. Tsy misy anaran-toetr'ireo tompon-trosa koa ny raharaha iray momba ny firaketana an-tsoratra Ny tale sy solontenam-panjakana irery ihany no resaka firaketana an-tsoratra. Afaka mandamina ireo toerana ireo mihitsy aza ny tsirairay. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny nomena voatendry, ohatra, dia afaka manatsara ny tsiambaratelo sy ny tsiambaraton'ireo tompon'andraikitra "marina" ao amin'ny orinasa. Ampiasao ny serivisy nomena nomena anao, azonao antoka fa ny anaranao dia ho tsiambaratelo amin'ny maso tsy mety.
Ohatra, afaka mandoa ny sasany amin'ny fandraharahana momba ny varotra sy ny fampiasam-bola ianao any amin'ny Nevada Corporation. Izany dia mety hampitombo ny fiainana manokana sy hiarovana ny fananana. Azonao atao ny manatanteraka izany amin'ny alàlan'ny fametrahana fikambanana iray ao amin'ny fonenanao ao an-tokantranonao, avy eo ny orinasa iray hafa any Nevada. Ny orinasa Nevada, ho setrin'izany, dia azo ampiasaina handefa sy handray fidiram-bola avy amin'ny orinasam-panjakana. Noho izany, ny orinasa azonao atao ao an-tokantranonao dia afaka manakarama ny orinasa any Nevada. Mety ho zavatra toy ny fitantanana, fanaraha-maso, na amin'ny fivarotana fitaovana fandraharahana, sns.
Mifanaraka amin'ny fepetra ara-batana
Satria ianao dia efa nametraka ny orinasanao ho toy ny orinasan-toeram-ponenana any Nevada (amin'ny fampiasana ny programa Office Office Nevada Office na Nevada Virtual Office), ary nandamina ny fanendrena ofisialy avy amin'ny nomena nomena nomena nomena nomena nomena anao. miaraka amin'ny tsiambaratelo tanteraka. Azonao atao ny manefa ny karamanao avy amin'ny Nevada Corporation. Satria ny fandoavan-ketra federaly an'ny C Corporation dia ambany lavitra noho ny taham-pon'ny tsirairay amin'ny ankapobeny rehetra, azonao atao ny manatom-bola hafa. (Raha mbola misy orinasa iray miasa ao amin'ny fanjakana misy hetra ara-bola, dia tsy maintsy manaraka ny lalàna momba ny hetra amin'ny fanjakana izay ampiasainy izy io. Mety tsy tafiditra ao amin'ny Nevada ny tombontsoa azo avy amin'ny haba tsy voavidim-bola raha tsy mandeha any Nevada. mpanolotsaina).
Ohatra fanampiny: Raha manana vola be dia be ianao, dia afaka mamorona orinasan'ny orinasan'ny Nevada Limited ("LLC") mba hitazomana an'ireny fampiasam-bola ireny. Azonao atao ny mandamina ny orinasanao any Nevada mba hitantana ireo vola ireo, ary handoavana saram-pandraharahana "ho an'ny orinasam-pitantanana" any amin'ny orinasanao any Nevada avy amin'ireto fampiasam-bola ireto amin'ny LLC. Amin'izay fotoana izay ny anaranao dia tsy hiditra an-tsoratra mba hahazoana izany rehetra izany, ary handoa vola, fidiram-bola.
Inona ny programan'ny Office Virtual?
Mba hahazoana tombontsoa manokana momba ny fiainana ara-bola, ny famerenana voafetra, ary ny fiarovana izay omen'ny orinasa Nevada Corporation anao, dia tsy maintsy mahafeno fepetra "mahaleotena" izy io. Tsy maintsy ho ampy hanaporofoana fa ny orinasanao dia orinasa ara-dalàna sy ara-drariny any Nevada.
Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mandalo ireo fitsapana tsotra ireo izy ireo:
Ny orinasa dia tsy maintsy manana adiresy fandraharahana any Nevada, miaraka amin'ny fidiram-bola, na manohana ny antontan-taratasy ho porofo.
Ilaina ny laharan-telefaona any Nevada. 
Tsy maintsy manana lisansa momba ny orinasa Nevada
Ny Corporation or LLC dia tsy maintsy manana kaonty Bank Nevada momba ny karazana (fanamarinana, kaonty brokerage, sns).
Biraon'ny Virtual Office
Araka ny hita amin'ny fepetra takiana amin'izany, ny paositra PO Box na ny serivisy fanontana dia tsy ampy. Mba hahafahana mandalo, dia tsy maintsy misy toeram-ponenana velona sy miaina manohana ny orinasanao Nevada. Ny tsy fisian'ny fanokafana ary fanohanana ny birao dia mety ho lafo be, indrindra raha ny Fikambanana any Nevada dia fanitarana ny paikady momba ny fandoavana hetra ary mitady ny hampiakarana ny fampiasam-bola ao amin'ny orinasa ianao. Rehefa manokatra birao ianao, dia tsy maintsy mametraka ny hofan-trano, ny mpiasa, ny tolotra, ny telefaona ary ny tolotra, ny hetra, ny fanampiana, ary ny fiantohana. Andeha hojerentsika ao anatin'ny fomba fijery "isam-bolana" ireo:
Asa vaventy $200
Telefonina & data $100
Hetra amin'ny asa $300
Navoakan'izy ireo haingana ny vidin'ny $ 6,00 isam-bolana. Raha ny marina, ireo dia tombanana ara-toekarena saro-pantarina, izay tena sarobidy kokoa ny vidiny. Ampitomboy io sary io amin'ny 12, ary azonao jerena fa na dia "base de operation" fototra aza dia mety handany ny orinasanao $ 72,000 isan-taona.
Saingy manana vahaolana mazava isika mba hanomezana izay ilainareo! Azontsika atao ny manatanteraka izany rehetra izany ho an'ny orinasa manomboka amin'ny marina $ 995 ho $ 2,995 ho an'ny taona iray manontolo, miankina amin'ny fonosana fidinao. Amin'ny programan'ny birao miandraikitra ny Nevada na Wyoming (fantatra amin'ny anarana hoe programa fiantsoana virtoaly Nevada na Wyoming), dia afaka manolotra orinasam-panjakana sy adiresy an-tseranam-piasana izahay (nomena alalana), voatokana ho an'ny olona voakasik'izany nandritra ny ora ara-dalàna, ny nomeraon'ny findainao (zaraina), ny serivisy mailo manokana, ary ny fanampiana amin'ny fisokafan'ny banky na ny kaonty brokerage. Manolotra tolotra mitovy amin'izany isika any amin'ny faritra maro any amin'ny faritra afovoan-tany.
Inona no tafiditra amin'izany?
Anisan'ireo orinasan'ny orinasan'ny orinasan'ny Nevada Corporation:
· Adiresy an-dalambe Nevada tena izy - voakasik'ireo mpiasan'ny fifanarahana avy amin'ny 8am mankany 5pm
Pasifika amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma.
· Fandefasana mailaka manokana ho an'ny zavatra ilainao
· Nizara nomeraon-telefaona valin-kevitry ny mpitsoa-ponenana velona iray ny Nevada
Fandefasam-peo ny Nevada
Fanampiana manokatra kaonty any Nevada raha ilaina
Fanampiana amin'ny fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa Nevada
• Mpiasa mivantana momba ny fifanarahana hiarahaba ny olonao mandritra ny ora fiasàna.
Ny Orinasam-Birao ao amin'ny orinasan'ny Virtual Office Nevada dia handoa anao $ 110 isam-bolana raha toa ianao ka mandoa iray volana isam-bolana miaraka amin'ny fanoloran-tena iray minitra iray taona, fa afaka manararaotra ny $ 325 fihenam-bidy ho an'ny fanonerana isan-taona. Tsy mandoa afa-tsy $ 995 ianao mandritra ny taona iray manontolo amin'ny serivisy.
Ny tahiry amin'ny Office conventionnel
Ireo fonosana ireo dia afaka mahavonjy vola an'arivony tapitrisa amin'ny fandaniana amin'ny fitrandrahana, ary ny fitehirizana ny sarotra rehetra azonao, ary ny fanamafisana ny hetra.
Ny Biraon'ny orinasam-pandraharahana any Nevada dia manome sy manome ny fenitra rehetra ilaina ho an'ny orinasam-panjakana Nevada. Plus, ireo serivisy ireo dia omena amin'ny fomba mahomby sy mahay matihanina. Ireo mpiasa za-draharaha izay nanome ireo karazana tolotra ireo nandritra ny taona 30 dia mitantana ny raharahanao. Noho izany, afaka manolotra ity fandaharanasa ity amin'ny vidin-tsolika toy izany isika noho ny haben'ny fandraharahana ara-barotra sy mahomby.
Ny isa amin'ity pejy ity na ny endrika omena dia azo ampiasaina mba hahazoana fampahalalana fanampiny momba ireo safidy mahavariana TAXES sy safidy TAFIKA azo ampiasaina amin'ny Programan'ny orinasanao Business Incorporated Virtual Office.